Kedu otu esi eme ka ahia di elu na uzo di elu? | ECommerce ozi ọma
Upselling bụ usoro ahia nke na-agba ndị na-azụ ahịa ume ka ha mụbaa ihe nzụta ha site na mkpali. Ebe igodo iji mezuo usoro ahia a di na eziokwu na n'ikpeazu inye ndi ahia ma obu oru nke na eme ka onyinye mbu diri site na iji ya.
N'ọnọdụ niile, ihe na-egosipụta njakịrị bụ na usoro ziri ezi ka ị nwee ike ịbawanye ego na azụmaahịa ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ edemede gị. Mana site n'usoro uzo di iche na ahia di iche na uzo ndi ozo. Ma ọ bụ nke ka mma ma ọ bụ nke kachasị njọ, mana dị iche iche na nke a bụ otu n'ime njirimara ya kachasị mkpa mgbe ị na-enyocha okwu a.
Mgbe aka nke ọzọ, anyị enweghị ike ichefu na upselling bụ a Usoro na-emecha na-enyere aka idowe gị ahịa dị ka ole na ole dị n'oge ahụ. Ruo n'ókè ụfọdụ na ọ na - ewepụta mgbakwunye na nzụta. Dị ka otu n'ime isi mmalite dị iche na ụdị ndị ọzọ nwere njirimara yiri ya. Si ebe i nwere ike dịkwuo gị ahịa na nke ahụ bụ mgbe niile otu n'ime ebumnuche ị na-achụ n'oge.
1 Upselling: Kedu ka ọ si emetụta ụlọ ọrụ gị?
2 Ngwa ya kwa ụbọchị
3 Na-agbagha agbagha, dịka ọ na-arụ ọrụ n'ezie
4 Ọnọdụ iji bulie usoro ihe a
5 Ihe ozo banyere ihe ire ere
6 Re ere na mmekọrịta na azụmahịa dijitalụ
7 Gịnị mere ire ngwaahịa ji dị mkpa?
8 Ihe dị iche n’etiti ire ere na ire ere
9 Omume ire ere kacha mma
Upselling: Kedu ka ọ si emetụta ụlọ ọrụ gị?
E nwere ọtụtụ ngwa na upselling nwere ike na-enye gị n'oge a. Mana n'ezie otu n'ime ihe kachasị mkpa bụ nke metụtara ọdịdị ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụụrụ m ihe dị ike.melite nyocha ndị ahịa site n'oge a gaa n'ihu. Ruo n'ókè ọ na-ahụ maka ịmalite igwe nke okike na nke ahu abughi obere ihe na oge ugbua ahia dijitalụ.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọ bụ usoro ziri ezi iji bulie usoro azụmaahịa gị n'ụzọ dị mfe, kwụ ọtọ na otu isi okwu dabara adaba site n'echiche niile. Nakwa eziokwu na ọ bụ atụmatụ na n'ikpeazụ nwere ike ime ka ị nweta ego karịa ma ọ bụ opekata mpe mee ka azụmaahịa gị baa uru site ugbu a gawa.
N'ime ụdị atụmatụ a na ụwa azụmaahịa, ọ bụ ihe ziri ezi ikwu na ọbụlagodi mgbe ịzụrụ, ị nwere ike iji ozi ịntanetị nkeonwe iji dọta ndị ahịa ịlaghachi maka ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, na ọ dịghị obere ihe dị mkpa bụ eziokwu dị mkpa na njedebe ị eme dịkwuo ego. Ọbụghị naanị nke ahụ, ọtụtụ oge ka enwetara ya na ngwaahịa enyere na mbugharị karịa ngwaahịa nke onye ahịa kpebiri iji ha na mbụ.
Ngwa ya kwa ụbọchị
Ọ dịkwa mkpa imetụta okwu a dị mkpa na ịme ahịa na-enwe nnukwu ihe ịga nke ọma ị ga-enwe ihe ịga nke ọma, ị ga-eleba anya n'akụkụ ndị a:
- Ikwesiri ime ya n’oge kwesịrị ekwesị. Nke a na-abụkarị n'ahịa ahịa na n'ime nke a mgbe onye ahịa etinyela iwu ma ọ bụ na-ewepụrịrị kaadị akwụmụgwọ ịzụta. Dịka ọmụmaatụ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, mgbe onye na-eri nri nyere iwu ya, ọ bụ oge dị mma ịsị "want chọrọ achịcha galik maka naanị otu euro ọzọ?".
- Ikwesighi ka iwe iwe. Akụkụ a na ire ere bụ mgbakwunye ọzọ. Onye ahịa azụtala ihe ọ chọrọ, anyị ereworị. Ọ dịghị mkpa ịnwale maka ihe niile m zụtara ndọtị ngwaahịa ahụ. You nwere ike iche n’ịga McDonalds ma na-ekwusi ike idobe nnukwute menu ugboro ugboro? Mba. Nke a bụ ajụjụ dị mfe nke na-enyere ndị ahịa aka imeziwanye ahụmịhe ha na ngwaahịa a zụrụ na mbụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ị chọghị ya, ọ dịkwa mma.
Na-agbagha agbagha, dịka ọ na-arụ ọrụ n'ezie
A na-ejikarị ire ere na ịkwalite ngwaahịa na-agbanwe agbanwe, mana ọnọdụ dị iche iche na ndị ahịa dị iche iche nwere ike ịchọ ka elebara anya na nke ọzọ. Okwu ahụ bụ "upsell" metụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe atụ ebe a tụrụ aro maka ngwaahịa (ma ọ bụ kwagide ya) na mgbakwunye na nke a na-azụ. Site na imata ihe di iche na n ’imeghari na ire ire, igha etinye onwe gi na uru.
Productsre ngwaahịa ndị dị elu na-agba ume ịzụta ihe ọ bụla na-eme ka ngwaahịa isi dị oke ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, igwefoto nwere ike ịbịakọta batrị, ma ịzụta ihe nbipute nwere ike iduga ịzụta ink na-atụ aro.
Ahịa ire ere bụ aro nke ngwaahịa ọ bụla ọzọ azụrụ n'akụkụ ngwaahịa bụ isi: nyocha nyocha mgbe ị na-azụ onye nbipute, ma ọ bụ ntụnye conditioner mgbe ahọpụtara ncha ntutu. Ebe odi nkpa ka igosiputa ihe di iche iche nke ihe ndia yiri ya ma ghara ime ka ndi ahia gi ghara inwe otutu nhọrọ.
Ọnọdụ iji bulie usoro ihe a
Mara onye n'ime ha na-enweta nsonaazụ.
Chọghị ịtụ ndị ahịa gị aro site na ntụnye ngwaahịa - ka emechara, ha azụọla ahịa n'aka ụlọ ọrụ gị, yabụ na ị na-anwa inyere ha aka ịmekwu ihe ịga nke ọma site n'inye ha ntụnye ndị ọzọ ha nwere ike iji. Site na ohere ole na ole ịbawanye ahịa ma ọ bụ ire ere, ịchọrọ iji usoro nke ga-enweta nsonaazụ kacha mma.
O nwere ike ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ire ere na-arụ ọrụ oge 20 karịa ka ire ere ahịa. Ozugbo ndị na-azụ ahịa nwere ngwaahịa n’uche, ha achọghị ka ihe ọzọ megharịa ha anya. Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na - eme ka nhọrọ nke mbụ gị ka mma karịa, agbanyeghị… Nke ahụ bụ ihe ị ga --enwekarị ike ịbanye na ụgbọ.
Mgbe ụfọdụ ire ngwaahịa abụghị nhọrọ, dịka na ihe atụ gara aga nke ịzụta ncha ntutu. Ntughari ahia na-ere nwere ike ime ka ncha ntutu gi di nma. Site na ihe ndozi, frizz na-achịkwa ngwaahịa, ịgba sprays na ihe ndị ọzọ, ị nwere ike inyere onye zụrụ aka hụ na ha nwere afọ ojuju na ntutu ha mgbe ịzụrụ.
Inye obe-ere nke nwere ezi uche.
Ọ bụrụ n’itinyela ekwentị maka onye nnọchi anya ndị ahịa ka ọ nyere gị aka dozie nsogbu dị mfe, naanị ịnwe “ohere” otu nde tupu ị jụọ gị maka ozi, ị nwere ike ịghọta nkụda mmụọ ndị ahịa gị nwere ike inwe. Ya mere, aro maka ire ere ma ọ bụ ire ere nke gafere kpamkpam na aka ekpe agaghị eme ka ha nwee nkụda mmụọ, mana ha nwere ike itinye mmekọrịta ha na ụlọ ọrụ gị n'ihe ize ndụ.
Ekwesịrị ịkọwapụta atụmatụ gị maka mkpa ndị ahịa ọ bụla n'otu oge ahụ ka gị na ha tụlere. Gee ntị na akara dịka "Achọrọ m ka m mee X" ma ọ bụ "Ọzọ anyị chọrọ ịnwale Y" iji nye gị echiche nke onye ahịa gị chọrọ karịa iji nweta nsonaazụ ha chọrọ. Na-ege ntị na mkpa na ihe ha chọrọ, chọpụta nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nwere ike inyere ha aka, ma nyefee ire ere ma ọ bụ ọnụahịa ọnụahịa.
Ihe ozo banyere ihe ire ere
Ahịa Cross na-achọpụta ngwaahịa ndị na-agbakwunye mgbakwunye na nkwado ndị ọzọ nke isiokwu mbụ anaghị ekpuchi. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịre mkpuchi ihu na onye ahịa nke zụrụ draya ntutu. Ọtụtụ mgbe, ndị na-ere ihe na-ere ahịa na ngwaahịa ndị ha gaara azụta; Site na igosipụta ha n'oge kwesịrị ekwesị, ụlọ ahịa na-ahụ na ha na-ere ahịa.
A na-ere ire obe n’ahịa ọ bụla, gụnyere ụlọ akụ na ụlọ ọrụ ịnshọransị. A na-eresị ndị debanyere aha nchekwa ego kaadị akwụmụgwọ, ebe a na-atụkarị ndị ahịa ịzụta mkpuchi mkpuchi mkpuchi ndụ egwu.
Na e-commerce, a na-ejikarị ire ere na peeji nke ngwaahịa, n'oge usoro ndenye ọpụpụ, na mkpọsa ndụ. Ọ bụ a ukwuu irè tactic n'ịwa imekwa ịzụrụ, na-egosi obosara nke katalọgụ ndị ahịa. Ahịa ire ere nwere ike ime ka ndị ọrụ mata ngwaahịa ndị ha na-amabeghị na mbụ ka enyere ha, si otú a nweta ntụkwasị obi nke ndị ọrụ dịka ndị na-ere ahịa kacha mma iji hụ otu mkpa.
Re ere na mmekọrịta na azụmahịa dijitalụ
Wholesaling na-ejikarị tebụl atụnyere iji zụọ ndị ahịa ngwaahịa dị elu. Igosi ndị nleta na ụdị ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ nwere ike ịbawanye mkpa ha nwere ike ịbawanye AOV ma nyere ndị ọrụ aka inwe afọ ojuju na nzụta ha. Companlọ ọrụ ndị kachasị ire ere na-arụ ọrụ nke ọma n'inyere ndị ahịa aka iji anya nke uche hụ uru ha ga-enweta site na ịtụ ihe dị elu.
Ahịa Cross-sell na Ere Kasị Elu yiri nke ahụ na ha abụọ na-elekwasị anya n'inye ndị ahịa uru ọzọ, kama ịmachi ha na ngwaahịa ndị azụrụ. N'okwu abụọ a, ebumnuche azụmaahịa bụ ịbawanye uru iji wee gwa ndị ahịa maka nhọrọ ngwaahịa ọzọ nke ha nwere ike ọ gaghị ama. Isi ihe ga-eme ka ihe ịga nke ọma na ikpe abụọ ahụ bụ ịghọta n'ezie ihe ndị ahịa gị ji kpọrọ ihe wee zaghachi na ngwaahịa na atụmatụ kwekọrọ ekwekọ nke na-egbo mkpa ndị ahụ n'ezie.
Gịnị mere ire ngwaahịa ji dị mkpa?
Ọ bụ ezie na usoro ịzụ ahịa na-ewetara anyị echiche na-adịghị mma n'ime anyị, mgbe emechara ya, ha nwere ike imeziwanye ahụmịhe ahịa anyị. Ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-adabere n'ụzọ dị ukwuu n'usoro ire ere maka ọtụtụ ihe:
Re ire ere na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịmekọrịta mmekọrịta miri emi na ndị ahịa. Eresị ire ere abụghị aghụghọ ruru unyi, ma ọ bụrụ na itinye ya n'ọnọdụ. Ọ bụrụ n’ilekwasị anya n’inyere ndị ahịa gị aka “merie” site n’ịtụnye ego na ụgwọ ọrụ, nkwalite, ma ọ bụ ihe mgbakwunye nke ga - eme ka ha nwekwuo uru ma mekwaa ka ha chee na ha enwetala ego kachasị mma, nke a ga - abụ ihe ahịa tactic nke na-eweputa ego ozo.
Ọ dị mfe ịbawanye ahịa nye ndị ahịa dị ugbu a karịa inweta ndị ahịa ọhụrụ. Ndu ndu bụ okfu ẹphe. Ọ dị mfe ma dị ọnụ ala karịa ịkwalite ọrịre nke onye ahịa ahụ tụkwasịrị gị obi na onye zụtara gị ihe n'oge gara aga ma ọ bụ onye na-achọ ịzụta ugbu a karịa ịre ya na atụmanya ọhụụ nke anụbeghị banyere akara gị. ... Dị ka anyị kwurula na mbụ, ị nwere ohere 60-70% nke ịre onye ahịa dị ugbu a yana naanị 5-20% ohere nke ịre onye ọbịa. Ọ bụ mmeri dị mfe maka ọtụtụ azụmaahịa e-commerce na ebumnuche iji mee ka uto ha dị ngwa ma melite usoro ala.
Ahịa na-eduga na mmụba nke ndụ ndị ahịa (CLV). Ndụ Ndị Ahịa bara uru bụ onyinye net uru onye ahịa na-enye ụlọ ọrụ gị karịa oge. Nwere ike kewaa ndị ahịa gị ụzọ atọ: enweghị uru, baa uru ma baa ezigbo uru. CLV dị elu pụtara na ndị ahịa ọ bụla na - ewepụta ego maka azụmaahịa gị na - enweghị itinye ego ọ bụla, nke pụtakwara na ụlọ ọrụ gị nwere ego karịa iji nweta ndị ahịa ọhụrụ. Na-ere ngwaahịa bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji mee ka ndị na-azụ ahịa baa uru dị ukwuu ma na-eme ka ha laghachi.
Ndị ahịa na-abịaghachi maka ihe ndị ọzọ. Sellingre ahịa n'ihu bụ ihe pụrụ iche n'ụzọ ọ na-agbakwunye ndị ahịa uru nke na-eme ka ha chọọ ịlaghachi maka ndị ọzọ. Site na imepụta ụzọ dị mfe iji mee ka ndụ dị mfe maka ndị ahịa, ị ga-ahụ na ha ga-alaghachi n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na ha chọrọ karịa ihe ị na-ere. Jide n'aka na ị na-enye nnukwu ndị ahịa ọrụ n'akụkụ ọrụ ịre ahịa gị iji hụ na ndị ahịa nwere obi ụtọ n'agbanyeghị ihe.
Ihe dị iche n’etiti ire ere na ire ere
Na e-commerce, a na-eji usoro abụọ iji bulie ego site na ịba ụba ego ndị ahịa na-etinye na azụmahịa gị.
Ahịa ire ere na-eme ka ndị ahịa kwenye ịzụta ụdị ngwaahịa dị oke ọnụ karị, ebe ire ere na-elekwasị anya na ịme ndụmọdụ ahaziri maka ngwaahịa mgbakwunye ndị ọzọ.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ihe ị nwere ike ịdọrọ ụfọdụ nkuzi ndị ọzọ maka mmepe nke usoro azụmaahịa gị n'ịntanetị.
Cross-sell: Onye ahịa etinyewo sneakers site na nchịkọta afọ gara aga na ụgbọ ibu azụmahịa ha. Igosi ha na ihe oyiyi akpụkpọ ụkwụ ndị yiri ya ma dị oke ọnụ site na mkpokọta kachasị ọhụrụ nwere ike ibute ịbawanye ahịa.
Cross-sell: Onye ahịa atụnyewo akpụkpọ ụkwụ na ụgbọ ibu azụmahịa ha. Could nwere ike igosipụta nkwanye maka ngwaahịa ndị metụtara ya na peeji ịzụta (dịka ọmụmaatụ, sọks, ntinye, ma ọ bụ eriri akpụkpọ ụkwụ) iji rata ha ịzụta ihe ndị ọzọ na-abawanye uru ịzụta.
Omume ire ere kacha mma
Nwere ike iji usoro ahịa ahịa atọ:
Tupu ịzụta: gosipụta nkwupụta na ala nke ngwaahịa / udi peeji ma ọ bụ na sidebar (mgbe ụfọdụ ma).
N'oge ndenye ọpụpụ: gosipụta nkwenye site na windo mmapụta, n'ụgbọ ahịa, na peeji ndenye ọpụpụ, ma ọ bụ ozi ịntanetị agbagha.
Zụọ azụ: Jiri ozi ịntanetị na-agbaso nke ọma ịrata ndị ahịa ka ha laghachi azụ maka ndị ọzọ.
A na-ewu ihe ịga nke ọma na ịghọta mkpa ndị ahịa na-eme ka ahụmịhe ịzụ ahịa na-atọ ụtọ. Cheta, ezigbo ọrịre na-eme ka ndị ahịa na-eche mgbe niile dịka ha meriri. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ezigbo omume iji nwaa:
Na-akpali ndị ahịa ma kwụghachi ndị ahịa ụgwọ maka itinyekwu ego na saịtị gị (dịka ọmụmaatụ, nyefee mbupu n'efu ma ọ bụ nwepu ego na ịzụrụ ihe n'ọdịnihu).
Jiri ihe atụ yiri nke ahụ gosipụtara uru nke ngwaahịa kachasị ọnụ.
Jide n'aka na ngwaahịa ị na-achọ ire bụ n'ime oke ọnụ ahịa dị mma. Ndị ahịa agaghị akwụ ụgwọ karịa 25% nke ihe ha zubere imefu.
Emela ihe anabataghị. Gosiputa uzo ozo di ma nye ndi ahia gi otutu ohere ka ha jiri aka ha kpebie.
Mepụta echiche nke ịdị ngwa site na ikwupụta mmelite oge na ngwaahịa ha ("naanị ihe 2 fọdụrụ") ma ọ bụ site na ichetara ha na onyinye ahụ dị maka obere oge.
Jiri data ndị ahịa iji hazie onyinye zuru oke ma tụọ aro ngwaahịa ndị na-agbakwunye zụọ.
Kụziere ndị ahịa banyere ihe egwu, ma ọ bụ ohere ndị funahụrụ, nke iji ihe onyinye ahụ eme ihe.
Jiri asụsụ kwesiri ekwupụta uru dị nzụta ma ọ bụ ọghọm nke ịzụrụ ngwaahịa akwadoro. Echiche bara uru bụ isi.
Gosipụta ụdị ngwaahịa dị iche iche dị mma mana ejirila ọtụtụ nhọrọ mechie onye ahịa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Kedu otu esi eme ka ahia di elu na uzo di elu?
aha m bụ Eden na Albania na m na-arụ ọrụ dị ka onye nlekọta na Central Bank nke Albania tupu m lụọ nwunye m, m lụrụ onye na-elekọta anụ ụlọ m na-arụ ọrụ maka nzukọ m na abụ m ụdị nwoke m maara ịgwa enyi m nwanyị okwu. Anaghị m agwa m uche m n'ihi na m na-atụ ya ụjọ oge niile, amaghịkwa m ihe kpatara ya, echekwara m na ọ naghị atụ ụjọ, m na-agba mbọ ịkọrọ ya oge ole na ole iji gwa ya otu m si eche banyere ya mana m enweghị ike.
Ihe ndị a bụ àgwà m hụrụ n’ime ya nke mere m ji hụ ya n’anya ebe a bụ ndị a, ọ mara ezigbo mma, nwee mmasị, agwa ya dị mma nke ukwuu, nwee oke obi ike, enweghị ụjọ, achọghị ọdịmma onwe ya naanị, mara mma ma mara ihe.
Akpọrọ m ya ụbọchị ole na ole mana ụjọ na-atụ m iziga ozi ahụ, a na-akpọ nwata nwanyị ahụ Ajola, m ga-eme ka enyi m mara ihe m na-agabiga nakwa na ezigbo enyi m anatala email site na dọkịta na-abịa. idozi esemokwu dị n’etiti ezigbo enyi m na nwunye ya dịka afọ abụọ gara aga.
Agaghị m ekwenye anwansi ọ bụla n'ihi na m ji okpukpe mana m ga-ekwu ntakịrị, m ga-akpọtụrụ dọkịta a ma kọwaara nwa agbọghọ ahụ na m chọrọ ka ọ bụrụ nwunye m ma dọkịta gwara m ka m soro nzọụkwụ m na ole na ole izu ole na ole ka nke ahụ gasịrị, Ajola. Ọ gwara m na ọ hụrụ m n'anya na ọ bụ ya kpatara agbamakwụkwọ anyị wee kpọọ dọkịta ka ọ bịa ụbọchị agbamakwụkwọ anyị ma taa anyị na-eme emume ncheta agbamakwụkwọ anyị ma enwere m obi anụrị.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na ndụ, egbula oge ịkpọtụrụ dọkịta a na email na-esonụ: spellspecialistcaster937@gmail.com
Etu ị ga - esi were kwarantaini mee ka uzo gi na nzuko na nzuko